Ixabiso leFactory yaseTshayina eliPhantsi leBhokisi yoSasazo lweCable ye-Voltage Supplier-shengte abavelisi kunye nabanikezeli |Shengte
Olu chungechunge lwe-low-voltage cable distributors lusebenzisa i-50 / 60HZ elinganisiweyo, i-voltage elinganisiweyo ye-380V (660V) inkqubo yamandla njengokuhanjiswa kwamandla kunye nokulawula amandla, ukukhanyisa kunye nezixhobo zokuhambisa.
Ilungele iindawo zikawonke-wonke zangaphandle ezifana neendawo ezahlukeneyo zokusingqongileyo, izikhululo zokuguqula kunye nokuhanjiswa, amashishini oshishino kunye nemigodi kunye neendlela zasezidolophini, iindawo zokuhlala zaseGadini, izakhiwo eziphakamileyo, izikhululo zeenqwelo-moya njalo njalo.
Ifaneleke ngokukodwa ukuba isetyenziswe kwimizi-mveliso enegesi edlayo njengemizi-mveliso yepetroleum neyemichiza, nakwiindawo ezinenkungu enetyuwa eninzi njengendawo engaselunxwemeni neziqithi.
A. Icandelo lebhokisi lenziwe nge-polymer composite material efakwe ngokupheleleyo (SCM) ngokucinezela ubushushu obuphezulu obunqamlezayo.Ibhokisi yonke ihlanganiswe ngendandatho yecandelo ngalinye elisebenzayo kwaye inokuvelisa ukuchaneka okuphezulu.Ulwakhiwo lwayo luyinoveli, icwecwe kwaye kulula ukuyidibanisa.Kwaye ineempawu ezizodwa zoyilo lwemvula kunye noyilo lokungenisa umoya.
B. Ikhabhinethi inomsebenzi obalaseleyo wombane.Isalathiso se-insulation, amandla e-dielectric, isalathisi sokumakisha ukuvuza kunye nesalathisi sokumelana nokuguga zigqwesile.Ukujiya akufane kwenzeke nakwiindawo ezimanzi kakhulu nezinzima.
C. Kwaye inamandla kakhulu omatshini.Ngokusebenza okungenakulinganiswa kokhuseleko lwebhokisi yensimbi, nokuba umgca ngaphakathi kwebhokisi uphukile okanye wonakaliswe yimpembelelo yamandla angaphandle, ayiyi kubangela ukuba ibhokisi lihlawulwe, ngokukodwa lifanelekile kwiindawo ezinabantu abaninzi ngaphandle komnatha wokukhusela.
D. Inxalenye yonke yebhokisi ibunjiwe kwaye idityaniswe ngeebhloko zokwakha, ngoko inomlinganiselo ophezulu wokuchaneka kunye nofakelo olufanelekileyo.
E. Ukusebenza kakuhle kwe-insulation.Umzimba wekhabhinethi ukhuselwe ngokupheleleyo, ngaphandle kokongeza ukusebenza kakuhle kwe-insulation ye-grounding system material ngokwawo kunye noyilo olukhethekileyo lwesakhiwo somoya, unokuthintela ngokufanelekileyo ukwenzeka kwe-condensation kunye neqabaka kumzimba wekhabhinethi.
F. Ukuchasana nokugqwesa kweekhemikhali ezigqwesileyo kunye nokusebenza, kunokuxhathisa ngokufanelekileyo i-asidi ebuthakathaka, i-alkali ebuthakathaka, i-spray yetyuwa, i-corrosion yemvula.
G. Ukumelana nokuguga okugqwesileyo.Ukongeza izinto ezichasene ne-ultraviolet kwizinto eziphathekayo kwenza ibhokisi ibe yinto ehlala ixesha elide kwaye inobomi obude benkonzo.
H. Isakhiwo esivaleleke ngokupheleleyo esinoyilo olulodwa olungangenwa yimvula, umgangatho wokhuseleko ukuya kuthi ga kwi-IP44 okanye nakwi-IP54.
I. Amacandelo angaphakathi atyebileyo enza ukufakwa kwezinto zombane kube lula, kukulungele, ubunzima obulula, amandla aphezulu, ukumelana nokushisa okuphezulu kunye nokutshatyalaliswa komlilo, isakhiwo esipheleleyo sizinzile, sikhuselekile kwaye sithembekile.
J. Ubume obubambekayo, uyilo oluhle kunye nombala wendalo, uhambelana kwaye uhle, akukho ngcoliseko yokukhanya.
Inombolo yesiriyeli Igama Inkampani ixabiso elisemgangathweni Ukusebenza kunye nezalathi Umgangatho wovavanyo
1 ukuxinana g/cm2 1.75 ～ 1.95 1.84 GB1033
2 Ukufunxa amanzi mg ≤ 20 18.3 GB1034
3 Ubushushu boMphezulu weThermal °C ≥ 240 240 GB1035
4 Amandla empembelelo yeCharpy KJ/m2 ≥ 90 124 GB1043
5 ukugoba amandla Mpa ≥ 170 210 GB1042
6 Ukumelana ne-Insulation (Eqhelekileyo) Ω ≥ 1.0×1033 3.0×1013 GB1410
7 Ukumelana ne-Insulation (ukuntywiliselwa 24h) Ω ≥ 1.0×1012 5.3×1012 GB1410
8 Amandla oMbane weDielectric Amandla MV/m ≥ 12.0 17.1 JB7770
9 Ilahleko yeDielectric factor (1MHz) -- ≤ 0.015 0.013 GB1409
10 Idielectric rhoqo (1MHz) -- ≤ 4.5 4.2 GB1409
11 Ukunganyangeki kombane s ≥ 180 190 GB1411
12 Isalathiso sokuMakisha ukuvuza (PTI) v ≥ 600 600 GB4027
13 Ukusilela komlilo iklasi FVO FVO JB7770
14 Ityhefu yomsi iklasi Ⅱ Ⅱ JB7770
15 Ukuxinana komsi iklasi Ⅱ Ⅲ JB7770
Inombolo yesiriyeli Iprojekthi Inkampani ipharamitha yobugcisa
1 Ilinganiswe rhoqo Hz 50/60
2 Ixabiso lombane osebenzayo V AC 380/660
3 I-voltage elinganisiweyo yokufakelwa V AC 690/800
4 Ikalwe ngoku A ≤ 630
5 icw Ka 50(ls)
6 Ireyithwe kwincopho enyamezelekayo yangoku Ka I-100
7 Imizuzu eyi-1 yamatyeli ombane ukumelana nombane V 2500
8 Ukuqhawula umthamo Ka I-100
9 Inqanaba lokhuseleko -- IP44
10 Udidi longcoliseko -- Ⅱ
Ngaphambili: isiguquli sodidi olomileyo
Okulandelayo: ODM Factory 10KV/11KV Class S11/S13 Series Oyile-untywiliselwa Transformer itywinwe Ngokugcweleyo Amandla Transformer-shengte
Elona xabiso lilungileyo DFW-12 iCable Branch Box Box Supplier-she...